Qalabka Kulliyada SNAP - Wada-hawlgalayaasha Oregon-gaajo-la'aanta
Waa maxay sababta shaqadani muhiim u tahay
Ardayda kuleejka waxay la kulmaan cunno-la'aan iyo hoy la'aan heerar aan la aqbali karin. Nabadgelyo la'aanta cuntada iyo guryeynta waxay arday badan ku reebtaa doorashooyin yar waxayna caqabad ku noqon kartaa dhammaystirka shahaadada kulliyadda.
Laga soo bilaabo wadar ahaan 86,000 arday oo ka qaybqaatay dhawaan Sahanka Hope Lab, oo lagu qabtay 123 kulliyadaha bulshada iyo jaamacadaha dalka oo dhan:
45% waxay ahaayeen cunto yari 30kii maalmood ee la soo dhaafay
56% waxay ahaayeen kuwo ammaan-darro ah guriyeynta sannadkii hore
17% waxay ahaayeen guri la'aan sanadkii hore
Heerarkaan naxdinta leh waxaa ku jira xitaa sinaan la'aan aad uga walaacsan. Qaran ahaan, ardayda Transgender-ka ah, iyo sidoo kale ardayda Madowga iyo Dhaladka Maraykanka ah, ayaa si aan xad lahayn u saamaysay gaajada marka loo eego ardayda cadaanka ah.
Barnaamijka Kaalmada Nafaqada ee Dheeraadka ah (SNAP) waa hal kheyraad oo ka caawin kara ardayda inay noqdaan kuwo dhaqaale ahaan deggan, taasoo u oggolaanaysa inay dhammeeyaan shahaadadooda oo ay gaadhaan himilooyinkooda.
Nasiib darro, SNAP aad bay uga faa'iidaysteen ardayda kulliyadda. Dhawaan Warbixinta Xafiiska Xisaabtanka ee Dowladda Mareykanka la ogaaday in ku dhawaad ​​2- milyan oo arday oo heer qaran ah kuwaas oo suurtagal u ahaa in ay qaataan SNAP aanay soo sheegin in ay heleen dheefaha. Waxaa jira sababo badan oo suurtagal ah in ardayda u qalantaa aysan helin SNAP, oo ay ku jiraan ceebeynta iyo jahawareer ku saabsan u-qalmitaanka ardayga.
"In badan ayaan maqlaa, in qof kale uu uga baahan yahay SNAP in ka badan iyaga, xitaa marka aysan cuni karin qadada toddobaadka oo dhan. Uma baahnid inaad gaajooto. Uma baahnid inaad gaajooto. SNAP waa kheyraad! SNAP waa adiga!”
– Ardayga kuliyada bulshada Portland
Maxaad samayn kartaa si aad uga caawiso ardayda inay helaan SNAP?
Lahaanshaha istaraatijiyad fidineed oo xooggan oo SNAP ah oo udub dhexaad u ah ardayda ay gaajadu sida aadka ah u saamaysay, iyo bixinta kaalmada codsiga SNAP ee xerada, waxay ka shaqeysaa sidii loo jebin lahaa dhaleeceynta iyo kordhinta gelitaanka barnaamijka iyadoo bixinaysa macluumaad iyo taageero meelo la aamini karo. Caawinta wacyigelinta iyo codsigu waxay aad waxtar u leedahay marka ardayda, macalimiinta, shaqaalaha iyo codadka hogaaminta ay dhamaantood ku lug yeeshaan abuurista iyo hirgelinta qorshe wacyigelineed si ay shaqadaadu u gaadho tirada ugu badan ee arday ee suurtogalka ah, iyo shaqada guud ee kambaska oo la is waafajiyo oo la isku xidho. .
Qof kastaa wuu qaban karaa shaqadan. Waxaad noqon kartaa arday, maamule ama macalimiin. Haddii aad tahay arday, waxaad miiska saari kartaa SNAP xafladaha xerada, waxaad kala hadli kartaa SNAP ogeysiisyada fasalka, ama waxaad abuuri kartaa olole warbaahinta bulshada si aad ereyga u hesho. Haddii aad tahay xubin macalin, waxaad hubin kartaa inaad ku darto qoraalka baahiyaha aasaasiga ah manhajkaaga oo aad ogaato meesha aad u gudbiso ardayda si aad u hesho macluumaad dheeraad ah. Shaqaalaha maamulka ayaa taageeri kara ardayda samaynaysa wacyigelinta SNAP, bixinta kaalmada codsiga, iyo ka shaqaynta dhisida wada shaqaynta guud ahaan xerada si loo helo qorshe midaysan oo SNAP ah.
Qaar badan oo ka mid ah machadyada tacliinta sare ee Oregon waxay bilaabayaan inay SNAP ka sameeyaan xeryahooda iyo horumarinta hababka ugu wanaagsan si ay u ballaariyaan helitaanka-wax badan ka baro halkan.
Qalabkani wuxuu u jiraa inuu kaa caawiyo bixinta barnaamijka wacyigelinta SNAP iyo barnaamijka kaalmada codsiga ee kuliyadaada. Fadlan ku dhufo qaybaha soo socda ee xirmada qalabka halkaas oo aad ka heli karto macluumaadka iyo qalabka aad u baahan doonto.
Fahamka U-qalmitaanka Ardayga ee SNAP
Ardayga kuleejka SNAP tilmaamaha u-qalmitaanka ayaa dhawaan isbedelay Oregon, taasoo ka dhigaysa arday badan oo hadda u qalma. Riix halkan Wixii faahfaahin ah ee ku saabsan u-qalmitaanka ardayga kuleejka ee SNAP.
Fahamka u-qalmitaanka ardayga SNAP ayaa muhiim u ah hubinta in ardaydu geli karaan barnaamijka. Waxay kuu sahlaysaa inaad si kalsooni leh aad ugala hadasho ardayda SNAP oo aad dejiso xeelado wax ku ool ah oo SNAP ah.
Si aan kaaga caawino markaad kala hadlayso ardayda SNAP, waxaanu abuurnay liis hubineed degdeg ah oo xaq u yeelashada. Ardaygu wuxuu hubin karaa wax kasta oo iyaga khuseeya markaad dib u eegtaan si wadajir ah, si ardaygu si fiican u fahmo haddii ay u qalmi karaan SNAP. Kaliya Waaxda Adeegyada Aadanaha ee Oregon (DHS) ayaa go'aamin kara u-qalmitaanka SNAP, markaa haddii ardaygu aanu hubin, fadlan ku dhiirigeli inay codsadaan. Soo deji Liiska hubinta u-qalmitaanka Ardayga Kulliyada SNAP.
Su'aalaha inta badan la iska weydiiyo ee ku saabsan SNAP ee ardayda wuxuu bixiyaa jawaabaha su'aalaha caadiga ah ee la isweydiiyo.
Wax ka qabashada dhaleeceynta
Dhaleeceynta waa sababta ugu weyn ee arday badan oo kulleej ah aysan u helin SNAP. Waa muhiim in dhammaan fariimahaaga iyo ficilladaada ka jira jaamacadda ay ka shaqeeyaan sidii loo dumin lahaa!
Riix halkan si aad u soo dejiso dulmar gaaban oo ku saabsan sida wax looga qabto ceebeynta fariimahaaga SNAP.
Waan ognahay kala hadalka ardayda ee ku saabsan SNAP iyo sugnaanshaha cuntadu waxay noqon kartaa mid adag. Waxaanu kuu samaynay xaalado gaagaaban oo aad ku tababarto, oo aad kalsoonidaada u dhisto, oo aad u fududayso inaad la sheekaysato marka ardaydu ku joojiyaan inay kula hadlaan. Riix halkan si aad u soo dejiso xaaladaha dhaqanka gaaban.
Wacyigelinta ayaa muhiim u ah hubinta in macluumaadka SNAP uu gaaro ardayda, si ay u ogaadaan waxa barnaamijku yahay iyo sida loo galo. Waxaan soo bandhignay dhowr tusaale oo ah xeeladaha wacyigelinta ee ka dhacaya dugsiyada Oregon. Isticmaal tusaalahan si aad fikrado ugu kiciso adiga iyo kooxdaada markaad qorsheynayso wacyigelinta SNAP ee xeradaada.
Abuuritaanka qorshe wacyigelin ah oo SNAP ah oo ay ku jiraan xeeladaha wacyigelinta muddada-gaaban iyo muddada fog waxay kaa caawin karaan inaad si degdeg ah u gaarto ardayda iyo sidoo kale waxay siin kartaa boos ballaaran, wadashaqeyn guud oo kambuyuutar ah, taas oo qaadan karta waqti dheer in la hirgeliyo. Xeeladahan fidinta SNAP waxay si fiican u shaqeeyaan marka lagu xidho cadaalada cuntada ee jirta, TALLAABADA iyo barnaamijyada baahiyaha aasaasiga ah ee ka dhacaya xerada. Waxaan si aad ah ugu talinaynaa in la dejiyo qorshe wadashaqayn, iswaafaqsan oo ku lug leh ardayga, macalimiinta, maamulka iyo codadka hogaaminta abuuritaankiisa iyo hirgalintiisa. Sidoo kale muhiim ah in lagu dhex dhexaadiyo ardayda ay gaajadu saamaysay si aan micne lahayn marka loo eego qorshayntaada iyo wacyigelintaada.
Fadlan soo deji oo akhri iyada oo loo marayo tusaalahan xeeladaha fidinta SNAP iyo hababka ugu wanaagsan ee machadyada tacliinta sare.
Inta lagu jiro qorshaynta istaraatiijiyada wacyigelinta, waxaa laga yaabaa inay ku caawiso inaad isticmaasho jaantuska cabbiraadda si aad go'aan uga gaarto xeeladaha la isticmaalayo. Jadwalka cabbirkan loolama jeedo in lagu xaddido fursadaha laakiin in lagu bixiyo hab lagu gaadho go'aannada ku saabsan waxa waxtarka leh oo xarun u ah qiyamka gaarka ah ee shaqadaada. Soo deji jaantuska shuruudaha.
Aaladaha Gargaarka iyo Agabka
Waxaanu kuu samaynay agab wacyigelineed oo aad isticmaasho. Ardaydu waxay fikrad ka dhiibteen agabkan waxayna gacan ka geysteen qaabaynta fariinta. Dhammaan agabku waxa ay wataan farriimaha muhiimka ah ee SNAP ama macluumaadka u-qalmitaanka ardayda. Dhammaantood waa la soo dejisan karaa oo la daabici karaa.
Qaar badan oo ka mid ah agabyadan ayaa kuu banaan inaad wadaagto macluumaadka ku saabsan halka ardaygu ka tagi karo xeradaada si aad wax badan uga ogaato SNAP. Meeshaan waxaad ku dhejin kartaa calaamad ama waxaad ku qori kartaa macluumaadka. Waanu isticmaalnay calaamado halkan ka yimid agabka khuseeya (calaamadaha ku xidhan waxay si fiican ugu habboon tahay bookmarks hoose).
Haye Boodhka Ardayda
macluumaadka xaq u yeelashada
Haye Ardayda Bookmark
"Dhammaan ardaydu waxay xaq u leeyihiin inay gaajada ka xoroobaan" agabka
wax ka qabashada ceebeynta
"Gaajada kulliyadda maaha wax lagu dhaqmo" agabka
Sida loo codsado SNAP: A Student's Guide Flyer
Wacyigelinta Dijital ah & Xiriirinta
Qorshaha warbaahinta bulshada
Sawiradu waxay diyaar u yihiin warbaahinta bulshada iyadoo la isticmaalayo "Dhammaan ardaydu waxay xaq u leeyihiin inay gaajada ka xoroobaan"Iyo"Gaajada kulliyaddu maaha wax lagu dhaqmo” fariimaha
Farriinta ardayda ee baraha bulshada waa inay noqotaa mid togan, wargelin ah oo wax ka qabata ceebaynta.
Qorshaha warbaahinta bulshada ee waxtarka leh, fariintu waa inay ahaataa mid gaaban, feeran oo joogto ah. Qoraalada waa inay ku jiraan sawir, xiriiriye ama muuqaal, maadaama kuwani ay ka soo muuqan doonaan marar badan iyo dad badan oo ku jira warbaahinta bulshada.
Ku dheji dhinacyada ay khusayso qoraaladaada. Waxaad sumad u dhigi kartaa dugsigaaga ama kooxaha kale ee xerada aad la shaqaynayso. Waxaad sidoo kale nagu calaamadin kartaa! Waxaan nahay @HungerFreeOregon on Facebook, @gaajo-free on Twitter, iyo @gaajo_free_ama on Instagram.
Haddii aad ka shaqeyneyso Instagram ama Twitter, waa inaad ku dartaa hashtags. Waad samaysan kartaa kaaga ama waxaad isticmaali kartaa qaar ka mid ah hashtagyadayada: #SNAPisforyou iyo #SelfiesforSNAP. Si looxyada selfie loo isticmaalo fariimaha gaajada kulliyadda, riix halkan.
Si joogto ah ugu dheji Haddii aad dareento in toddobaadku uu aad u badan yahay (ama aan inta badan ku filnayn), u hagaaji jadwalkaaga dhejinta si waafaqsan, laakiin iska hubi inay joogto tahay.
Template-kaan waxaa ku jira macluumaadka aasaasiga ah ee ku saabsan SNAP, u-qalmitaanka ardayga kuleejka iyo xiriirinta macluumaad dheeraad ah. Waxaa loo isticmaali karaa wacyigelinta SNAP iyada oo loo marayo liiska emails-ka ama warqad ahaan lagu dari karo waraaqaha abaal-marin maaliyadeed ama waraaqo kale oo la mid ah.
Bixinta kaalmada codsiga joogtada ah ee meelaha la aamini karo ee ku yaala kambaska waxay ka caawisaa ardayda inay si fudud u dhamaystiraan nidaamka codsiga oo ay u maraan DHS. Qaybtani waxa ay ka kooban tahay hagaha kaalmada codsiga, oo ay la socoto PowerPoint, si loogu tababaro kuwa kale dugsigaaga.
Tilmaamaha Caawinta Codsiga
Hagahan waa buug tillaabo-tallaabo ah oo ku saabsan sida arday looga caawiyo buuxinta codsiga SNAP. Hagahan waxa uu si qoto dheer u bixinayaa tafaasiil qoto dheer oo ku saabsan u qalmida ardayga, halka laga helayo foomamka DHS iyo arjiga onlaynka ah, sida arday looga caawiyo buuxinta codsiga onlaynka ah, sida ardaygu uga caawiyo soo gudbinta arjiga, iyo tabaha caawimada dabagalka.
Riix halkan si aad u soo dejiso hagaha kaalmada codsiga.
Liiska hubinta gaaban ee tallaabooyinka kaalmada codsiga. Liiskan hubinta waxa uu bixiyaa hab degdeg ah oo lagu hubinayo in dhammaan tillaabooyinka habka codsiga la sameeyay.
Haddii aad rabto inaad bixiso tababar ku saabsan kaalmada codsiga ee dugsigaaga, halkan waa PowerPoint in la isticmaalo oo ka muuqda wax kasta oo ka socda hagaha iyo qoraallada waxtarka leh. Tababarkan wuxuu caadi ahaan qaataa 3-4 saacadood iyadoo ku xiran hadba inta ay le'eg tahay kooxda iyo heerka aqoontooda hore ee ku saabsan SNAP.
Dib u eeg codsiga internetka ee SNAP
Waxaan kugula talineynaa inaad u marto arjiga khadka tooska ah ka hor intaadan caawin arday. Akoonkaaga ayaad samaysan kartaa oo tijaabi su'aalaha, adigoo hubinaya inaadan soo gudbin. Hagaha kaalmada codsigu waxa uu ku siinayaa qodobbo muhiim ah oo aad ka ogaan karto codsiga khadka tooska ah.
Ardaydu waxay xaq u leeyihiin inay naftooda u doodaan inta lagu jiro iyo ka dib waraysiga DHS. Haddii ardaygu dareemo in si khaldan loogu diiday SNAP, way ka dacwoon karaan go'aanka waxayna ka codsan karaan dhageysiga DHS ee ku saabsan kiiskooda.
Wakiil dugsi ahaan, waxaad xiriir la yeelan kartaa xafiiska DHS ee kuu dhow oo waxaad ka caawin kartaa ardayda inay dhex maraan. Waxaad wici kartaa shaqaalaha DHS si aad u weydiiso inay dib ugu yeeraan arday ama weyddiiso maamulaha xafiiska ama shaqaalaha hogaanka si ay u eegaan kiiska ardayga haddii aad dareento inay wax qaldameen (ardayguna wuu codsan karaa middaan).
Khadka tooska ah ee dheefaha dadwaynaha ayaa ku caawin kara, wac 1-800-520-5292 wixii talo sharci ah ee ku saabsan faa'iidooyinka dawladda ama matalaadda dhegeysiga.
Wax ka baro kuwa kale
Waxaan kugu xiri karnaa qandaraaslayaasha SNAP iyo xiriirada dugsiyada Oregon oo dhan haddii aad rabto inaad wax ka ogaato waxay sameynayaan.
ku biir ah Oregon Baahiyaha Aasaasiga ah ee Shabakadda u doodaha– liiska iimaylka loogu talagalay kuwa taageera ardayda kuleejka Oregon ee leh baahida aasaasiga ah ee hagidda
Dariiqooyinka Fursada waxay isu keenaan kulliyadaha bulshada Oregon si ay u kordhiyaan gelitaanka ardayda ee federaalka, gobolka, iyo ilaha deegaanka si loo xaqiijiyo guusha ardayga. dheeraad ah halkaan ka baro.
Ilaha dheeraadka ah si aad u taageerto dadaalkaaga gelitaanka SNAP.
Ma jiro hal barnaamij ama hindise soo afjaraya gaajada iyo hoy la'aanta ardayda. Wacyigelinta SNAP iyo kaalmada codsiga waa in lagu daraa barnaamijyo iyo dadaallo ay ka mid yihiin maqaasiin cunto, lacag degdeg ah, u wareejinta dhaqanka kambaska oo loo beddelo "dhaqan daryeel" iyo lahaanshaha hagayaasha baahiyaha aasaasiga ah ee jaamacadda.
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan abuurista dhaqanka daryeelka guud ee kambaska, hubi daraasaddan ka timid Shaybaarka Hope ee Jaamacadda Macbadka: Daraasad Kiis Amarillo oo ku saabsan Dhaqanka Xannaanada.
Hubi in wacyigelinta SNAP iyo kaalmada codsiga ee kaambadaada ay diiradda saaraan sinnaanta. Waxaa laga yaabaa inay ku caawiso inaad u isticmaasho lenska sinnaanta qorshayaasha wacyigelinta iyo kaalmada codsiga. Kooxda Waxqabadka Sinnaanta (EAT) ee Hunger-Free Oregon waxay soo saareen dhowr lenses oo sinnaanta waxaanan si adag kuugu dhiirigelinaynaa inaad isticmaasho markaad qorshayso oo aad hirgeliso istaraatijiyadaha gargaarka codsiga SNAP.
EAT Lens-ka Sinnaanta ee La Shaqeynta Dadka
Cun muraayadda sinnaanta ee loogu talagalay ka-qaybgalka bulshada
EAT Lens-ka Sinnaanta ee Qorsheynta Dhacdooyinka
TALLAABADA (SNAP 50/50)
Ardayda helaysa SNAP oo raacaya GED, xirfadaha wada xidhiidhka Ingiriisiga (ESL), ama barnaamijka diirada saaraya xirfada waxay sidoo kale ka faa'iidaysan karaan barnaamijka STEP ee laga heli karo kuleej kasta oo bulshada Oregon ah. Barnaamijka STEP wuxuu caawiyaa ardayda marka ay ku hormarayaan dariiqa shaqo, dhisaan xirfado, helaan shahaadooyin kuleej (shahaado ilaa shahaado), oo ay u gudbaan fursadaha shaqo ee bixiya dhaq-dhaqaaq dhaqaale. STEP waxay siisaa ardayda hagitaan gaar ah iyo tababarid, si ay u helaan una dhamaystiraan barnaamijka kuliyada saxda ah.
Iyada oo ku saleysan agabka kulliyad kastaa leeyahay, waxaa sidoo kale jira maalgelin lagu kaalmeynayo baahiyaha aan la daboolin-maalgelinta farqiga u ah bixinta kharashka waxbarashada iyo khidmadaha gargaarka maaliyadeed ma dabooli doono, buugaagta, qalabka, iyo gaadiidka. Barnaamijku gabi ahaanba waa ikhtiyaari, waxaana loogu talagalay in uu ardayda siiyo waxa ay u baahan yihiin, marka ay rabaan. Wixii macluumaad dheeraad ah iyo si aad u hesho xidhiidhka ugu fiican ee kulliyad kasta, riix halkan.
Agabka Wax Akhriska
Qalab akhris oo dheeri ah oo la xiriira SNAP, nidaamyada cuntada, caddaaladda cuntada iyo sinnaanta. Kuwani aad bay u fiican yihiin si ay u sii qotomaan aqoontaada ku saabsan nidaamka iyo asalka sababaha gaajada.
Tababarro iyo Aqoon-is-weydaarsiyo
Haddi ay jirto danayn ku jirta kambaskaga si loo bilaabo ama loo balaadhiyo wacyigelinta SNAP, waxaanu fududaynaynaa aqoon-isweydaarsiyo is dhexgal ah si ay kaaga caawiyaan inaad la timaado xeelado la isku dubarido. Waxaan siinay tabobarro waxbarasho oo loogu talagalay Jaamacadda Oregon iyo Kulliyada Bulshada Portland taasoo keentay istaraatiijiyado la isku dubariday iyo qorshayaal hirgelinta dugsiyadooda. Nala soo xiriir haddii aad xiisaynayso!
503-595-5501 dheere. 301